Suusii Lammaa Magarsaaf Jecha Sanyiin Oromoo Dugugamee Baduu Qabaa? – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooSuusii Lammaa Magarsaaf Jecha Sanyiin Oromoo Dugugamee Baduu Qabaa?
Damee Boruutin, Ebla 13, 2019
Namni cubbuu qabu cubbuun isaan gubachuun ykn jiraachuun dhimma mataa isaa ti. Obbo Lammaa Magarsaa suusii yoo qabatee ittiin du’e ykn jiraate dimma mataa isaa qofa. WaanObbo Lammaa Magarsaa Uummata Oromoo qabiyyee qabatee lafa irraa dugugee ficcisiisuu qabuuf sababni tokko illee hin jiru.
Waan baayyee na gaddisiisuu fi na dhikkubsu namni kun yaroo sobaan uummata keenya afaanfajeessee akka dhumu gochaa jiru taa’ee ilaaluu dha. Ija keenya duratti waan hin jirree afuufaa dhumaatii uummata Oromoo sababa duraa tahee jira. Obbo Lammaa Magrsaa Presizedantii naannoo biraa irraa maalitu adda isa godhe? Dhugaatti yoo nama beekuu fi nama uummataaf dhaabbate tahe akkuma warra TPLF, Somalee warra biraa nageenya uummata naannoon isaa fi daangaa naannoo isaa tiksuuf dirqama duraa qaba.
Inni garuu waa’ee Oromiyaa fi Uummata Oromoo akka wadala harree alaakkuu malee waan bu’aa fi ijaa qabu amma har’aa kan hoojjeteef tokko hin jiru. Mootummaa Lammaa Magarsaa jalatti deddeebisamee yaroo Uummatni Oromoo naannoo adda addaatti dhumu, qee’ee isaa irraa buqqa’uu seenaaf ragaa tahaa jirra. Irra deddeebi’ee dhummaatii kana barreesseen jirra. Uummatni Oromoo nama kana mataa irratti baatee maaliif akka dhumuu qabu namaaf hin galu. Yoo presizedantii Oromoo tahe nageenya Uummata Oromoo fi daangaa Oromiyaa tiksuun gaaffii hin qabu. Yoo akka presizedantii Itoophiyaa itti kan of ilaalu tahe Uummata Oromoo fi Uummata Impaayeera Itoophiyaa hundaa kijibuu dhiise waa’ee Itoophiyaa isaa qofa haa hojjetu.
Yaroo tokko tokko oftuultota Amhaara irra ilaaluun baayye nama rakkisa. Sababni isaa waan warra hooggantoota Oromoo ofiin jettu kun isaan caalaa Itoophiyaa fi Amhaara tahee argama. Haalli kun abdii fi hawwii garaa keessaa qaban akka jabeessanii irratti hojjetan isaan irratti dhiibaa gochaa jira. Waggaan darbe tokko Uummata Oromoo bara qaanii, bara dhumaatii bara sobaan maqaa bilisummaan waanjoo garbrummaa OPDOn uummata keenyatti uwiste akka tahe dhokataa miti. Warri dhugaa jiru kana utuu arguu bilisa baanee jirra jedhu nama miti Waaqayyo illee dhiifama isaaniif hin godhu.
Biyyi Oromiyyaa waraanaa fi ibidaan gubachaa jira. Uummatni keenya kan durii daran adamsamaa, hidhamaa, ajjeefamaa, saamamaa fi qee’ee isaa irraa buqqisamaa hin jiruu? Qabeenyi fi manni jireenya isaa gubachaa hin jiruu? Waraanni har’a Lixa fi Kibba Oromiyaa keessa jiru boruu Baha, Kaabaa fi Jidduu Galeessa Oromiyaa hin qaqqabuu? Kun hunduu mallattoo bilisummaa fakkaata? Haala kana gonfachuuf qaqallii fi qaroo obbolaa keenyaa kumaatamaan wareega baase uummatni keenya?
Hooggantoonni OPDO akkuma jedhan Oromiyaa bara Minilki hammeenyaa fi jibba walaalummaan walkaa Uummata Oromoo fixe jedhamu sana deebisanii seenaa hojjechaa jiru. Karaa tokkoon qabeenyaa fi humna biyyatiin qabduu hundaan RIB Uummata Oromoo irratti bobaasuudhaan qabeenyaa fi Uummata Oromoo barbdeessaa jiru. Uummata Oromoo fi WBO hidhanaa hiikachiisuu irratti xiyyeefatnii jiru. Bara kanas akkuma bara Miniliki sana uummatni harka qulaa jiru diina of irraa faccisuun salphaa miti.
Meeshaa guddaan uummatni keenya har’a qabu tokkummaa isaa ti. Warra meeshaa irraa hiikatu caala kan uummata keenya hubuuf yaalu warra gandaa fi amanitin gargar qooduuf tattaafatu akka tahe ifa tahuu qaba. Amma Oromoon tokko tahee dhaabbatee jiru meeshaan baraa fi humna waraana kamuu iyyuu Uummata Oromoo cabsuu akka hin dandeenye onnee guutuun dubbachuu nan danda’a. Kaleessa adda duree Qarree fi Qeerroo Oromoon uummatni Oromoo nama nyaataa waraana Wayyaanee harka qullaa injifate. Qarree fi Qeerroon kaleessa har’a WBO tahee amma fuunyaan isaa gahutti hidhatee jira.
Yaroon diinni nutti roorisuu fi nu doorsisu biraa darbee jira. Galata WBO haa tahu gumaan uummata keenyaa utuu oolee hin buliin deebi’aa jira. Uummatni Oromoo nagaa jalata, lola hin barbaadu kan jedhu dhugaa hin qabu. Uummatni baayyeen lola keessa kan galu humna isa dhabamsiisuuf dhufu of irraa ittisuuf malee lola barbaade miti. Humna diinaa daangaa cabsee yoo nutti dhufu xuxxuqqaan deebisuun hin danda’amu. Mataa isaa keessa akka bofaa gadi dhawwuudhaan akka lammaffaa lafaa ka’ee nu hin lolle gochuun barbaachisaa dha.
Waan har’a Oromoo Walloo dugugganii lafa irraa balleessuuf jalqabe kun karoora wagga tokkoof irratti xiyyeefatame hojjetamaa ture akka tahe wal nama hin gaafachiisu. Oftuultonnii Amhaara kana irratti qophii gahaa godhanii jiru. Yaroon Oromoo buqqisuu yaroon hooggantoonni OPDO jilbeefatanii isaaniif hojjechaa jiran tahuu qaba. Rakkina maalitu jira. Uummatn Oromoo Somaalee irra hin buqqa’aa. Beenshaangul irraa hin buqqa’aa. Walloo irraa maalitu akka hin buqqaane godha kan jedhu tuffii qabu.
Oromoon Walloo adda. Umurii isaanii guutuu akka diina kana of irraa facisan jiratan. Bara tokko harka kenaniif hin beekan. Har’as weerartoota Habashaaf harka laatu jedhee hin shakku. Garuu shira OPDO jidduu galtee maqaa Itoophiyaan Habashaaf hojjetu of irraa eeguu qabu. Diinni guddaan OPDO dha. Kan Oromoo fakkaattee uummata keenyaa gurgurachaa jirtu. Oromoon hundi bakka jiru maraa obbolaa isaa Walloo jiraniif dirmachuu qaba. Hiriira duwwaa miti. Meeshaa, horii fi humnaan wal gargaaruun barbaachisaa dha. Lafa Oromoo takkuu tokko diinni kan fudhachuu danda’u reenfa keenya tarkaanfatee tahuu qaba.
Kana booda uummatni keenya warra hudduu nadheen Habashaa jala yaatuuf tole jedhee bara baraan gubachuu hin qabu. Ilmaan keenya bara baraan nu jalatti akka baalaa harcaatee hafuu hin qabdu. Uummatni keenya hiree isaa akka barbaadetti murteefachuuf referendamii fudhachuu. Itoophiyaa tokko godhee jiraachisuuf Uummatni Oromoo dirqama tokko hin qabu. Abba isaaf tahe wajjin biyyaa tokko ijaarachuun mirga isaa ti. Haqa keenya hojii irra olchuuf nama biraa eehama gaafachaa hin jiru. Bifa hundaan qabsoon godhamu jabaatee deemuu qaba. OPDO irraa badii yoo tahe malee waan gaarii irra eegachaa hin jirru. Kan OPDO kanuma har’a agaruun nu haa gahu.